ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ NDRC နှင့် Department of Foreign Capital and Overseas Investment မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Zheng Chiping ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Commerce
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ NDRC နှင့် Department of Foreign Capital and Overseas Investment မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Zheng Chiping ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Tue, 05/15/2018 - 09:00 -- adminDep
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၅ ရက်နေ့ ၁၃း၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ National Development and Reform Commission (NDRC), Department of Foreign Capital and Overseas Investment မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Zheng Chiping နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့၊ နံနက် (၉း၃၀) နာရီအချိန်တွင် Thursday Talk ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျင်းပ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် Myanmar Investors Development Association မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် ပေကျင်းမြို့အခြေစိုက် လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Ms. Ina Marciulionyte ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ လင်ချန်းမြူနီစပယ်ပြည်သူ့အစိုးရ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် Mr. Lu Zhihua ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိုင်ထွန်းသည် EUROCHAM Myanmar မှ Automotive Advocacy Officer ဖြစ်သူ Mr.Carlo Chiozzi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဦးဆောင်၍ ကျင်းပပြုလုပ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ H.E. Mr. Chen Hao ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိုင်ထွန်းသည် Muse Development Public Co., Ltd. မှ Executive Director ဖြစ်သူ ဦးသန့်ဇင် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိုင်ထွန်းသည် Asia Square Power Co., Ltd. မှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဒေါ်မီမီခင်ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
e-Government Conference & ICT Exhibition 2018 တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၀င်ရောက်ပြသ